Vaovao - Ireo mpanamboatra mould dia mifantoka amin'ny fitadiavana ny taranaka manaraka
Tahaka ireo fikambanam-barotra indostrialy maro dia maro, ny Fikambanana mpamokatra bobongolo China dia nanangana tetikasa kendrena hisintona ny tanora ihany koa.
Androany, ny fandraisana mpiasa ho an'ny mpiasa manaraka dia nanjary laharam-pahamehana ho an'ireo mpanamboatra sinoa. Fantatro fa toa cliché ity. (Amin'ny taonako dia fantatro tsara hoe inona ny clichés. Manaporofo koa izany fa efa antitra aho ary tsy an'ny "taranaka ho avy" intsony.) Ao amin'ny ozinina bobongolo sinoa, sarotra ny mahita ireo tovolahy teraka taorian'ny 95, ary ratsy tarehy ihany koa. Mandehana am-pianarana amboaram-bolo ary araho ny tompony hianaranao ny famolavolana bobongolo sy ny famokarana bobongolo. Ity toerana ity dia hijanona ao amin'ny fahatsiarovana ireo teraka tamin'ny taona 1980.
Amin'ny maha-taranaka manana traikefa am-polotaona am-polony tsikelikely, ny indostrian'ny plastika koa dia nanomboka nanjary "antitra". Io fironana io dia maika indrindra eo amin'ny sehatry ny famokarana lasitra. Ireo mpamokatra bobongolo dia mila maika hahita mpiasa tanora ary hitazona azy ireo amin'ity orinasa ity. Hita avy amin'izany fa amin'izao vanim-potoana tsy fisian'ny mpiasa mahay izao dia mbola ho raisina ho tanora hatramin'ny 40 taona izy ireo! Eny, 40 taona izao dia mitovy amin'ny 20 taona…
Ho fanampin'izany, ny fikambanan'ny indostrialy bobongolo hafa koa miasa mafy hampiroborobo ny fanatanjahantena ho avy.
Ho fanampin'izay, ny departemanta thermoforming ao amin'ny Society of Plastics Engineers an'ny Sinoa dia nanangana vatsim-pianarana ary miasa mafy amin'ny fananganana tanora maro hanatevin-daharana ny filankevi-pitantanan'izy ireo. Tamin'ny fifaninanana fanavaozana tao amin'ny Konferansa Thermoforming tamin'ny taona 2018, ny fiara voafehy tamin'ny radio noforonin'ireo mpandray anjara dia nampiasa vatana thermoformed miloko-izay tena tsara lavitra noho ilay "fifaninanana famolavolana faritra ho an'ny mpianatra" taloha.
Tamin'ny fivoriana tamin'ny taon-dasa, ny departemanta thermoforming koa dia nikarakara fifanakalozan-kevitra momba ny fandraisana mpiasa tanora “mitady unicorn” .Manantena aho fa ho mora kokoa ny mahita mpiasa tanora manandanja noho ny unicorn ao amin'ny angano.
Olana maharitra ny fandraisana mpiasa ny taranaka ho avy, ary mbola ratsy kokoa noho izany ny tahan'ny tsy an'asa any Shina ankehitriny. Ny famahana ity olana ity dia mitaky fepetra maharitra sy vaovao.